Ukuhlanza izindlebe nge-hydrogen peroxide: kanjani ukuhlanza kahle izindlebe nge-hydrogen peroxide?
Indlela yokuhlanza izindlebe nge-hydrogen peroxide?
Ukunakekela izindlebe kuyindlela edingekayo yokuhlanzeka. Futhi i-hydrogen peroxide iyisimo esihle sokuhlanza isibabule. Isixazululo sisiza ukuvimbela ukuqala kwesifo esinjalo njenge-otitis media. Ngaphezu kwalokho, lesi samakhemikhali siphulukisa amanxeba avulekile futhi asithinte izindawo ezonakalisiwe.
Ngakho, uzohlanza izindlebe zakho nge-peroxide. Ngaphambi kokuqhubeka nenqubo, kubalulekile ukwazi imithetho eminingana:
akukho amaqabunga okotini - amathiphu aqinile angalimaza ngaphakathi kwezingqimba ze-tympanic;
ukwelashwa kwezindlebe kufanele kwenziwe ngemva kokugeza - i-liquid ekhethekile isebenza njalo ekupheleni kwezinqubo zamanzi;
Ungalisebenzisi kabi - phakathi nesonto, ukuhlanza okulodwa kuwanele;
ungabi nkulu - ngezinkinga ezinkulu ezifweni ze-ENT, i-peroxide iyaphikisana;
ukulindela okungaboni - isixazululo akuyona i-panacea yezo zonke izifo, futhi uma ipulaki lesibhulabhaka ingadluli, kuyoba kufaneleka ukuxhumana nodokotela;
Sebenzisa kuphela ukubunjwa okuhlanjululwayo - isisombululo esingaguquki kungalimaza izindlebe nesikhumba sakho.
Akukho okuyinkimbinkimbi ekuhlanzeni izindlebe zomuntu. Kwanele ukuxuba i-hydrogen peroxide ngamanzi, sebenzisa ikhambi ngoboya bekotini bese uphatha indawo yangaphakathi yendlebe.
Indlela yokuhlanza izindlebe nge-hydrogen peroxide ezinganeni?
Ebusheni, izindlebe ziyingxenye ebuthakathaka yomzimba wokutheleleka. Ngakho-ke, udinga ukuqapha ubumsulwa babo futhi uvimbele ukuqoqwa kwesulfure.
Odokotela bezingane bayelulekwa ukusebenzisa i-peroxide ngezinhloso ezilandelayo:
susa isibabule nezinye izinhlobo;
ukuphatha i-otitis nokuvimbela ukubukeka kwabo;
hlambulula amanxeba amancane nge-hydrogen njenge-antiseptic.
Inqubo yokuhlanza kahle izindlebe zezingane kanje:
Beka ingane e-sofa, uyijike eceleni, indlebe phezulu.
Thela i-peroxide ku-pipette bese uyiphonsa endlebeni yengane yakho. Kwanele ama-3-5 amaconsi.
Iseluleko! Ukuze isixazululo sithathe futhi senze, ingane kufanele ilele phansi okungenani imizuzu eyi-10.
Ngemuva kokuba i-peroxide igxile kwisulfure, kuyadingeka ukuba isuse endlebeni: ingane ikhuphuka futhi igubha ikhanda layo eceleni. Izindawo zokuhlala ezingcolile kanye nesisombululo zisuswa nge-swab yekotini (kodwa hhayi ngenduku).
Ukuhlushwa okukhulu kwe-peroxide akufanele kudlulele ku-1.5%.
Ama-plugs aqhubekayo esibabule ezindlebeni zomntwana azodinga ukwelashwa esibhedlela.
Ukunakwa sicela! Izingane ezinyangeni ezingu-6 zingcono ukuhlanza izindlebe ngesisombululo esinjalo. Uma kungenjalo, kunengozi yokulimaza i-eardrum yengane.
Ukuhlanza izindlebe nge-hydrogen peroxide ezinja
Ukuhlanzeka kwesilwane yisisekelo sezempilo, hhayi kuphela yena, kodwa kubanikazi bakhe. Ngakho-ke, kubalulekile ukuqapha ukuhlanzeka kwezindlebe zezinja, ukuvimbela ukuthuthukiswa kwamapustules noma ukuqoqwa kwesibabule.
Inqubo efanele yokuhlanza izindlebe yilezi zenzo ezilandelayo:
Bathe inja bese uyisula ngethawula elithambile, uqaphele kuzo zonke izindawo zekhanda.
Ukushaya isilwane futhi ukhulume nayo, ngobumnene wabeka isilwane eceleni kwayo.
Gcoba ukotini ufake iperoxide bese uyibeka ngaphakathi kwendlebe yenja.
Hlanganisa indawo yekhanda lakho, ugweme ukunyakaza kwesilwane okungazelelwe nokungazikhukhumezi.
Nika inja ukugubha ikhanda futhi isuse izinsalela zesulfure ezingenakusiza kanye nesisombululo.
Phatha izindlebe zezinja ngodaka olumanzi, kodwa ungalufaki ngaphakathi kwegobolondo. Ungasebenzisa i-lotion noma i-oil oil efakwe kwi-disc ye-cotton. Kodwa ungasebenzisi i-swab yekotini engalimaza izibilini zangaphakathi zesilwane sakho.
Iseluleko! Ngemuva kokuthi uqedele ukuhlanza enye yezinja zezindlebe, qiniseka ukuthi ushintshe uboya obusetshenzisiwe esampula ehlanzekile. Uma kungenjalo, kungenzeka ukuthi ukutheleleka kumuntu ogulayo okuyingxenye yendlebe ibe enempilo.
Uma usuthole ukukhishwa okuhlanzekile noma i-edema eduze kwekhanda lezinja, thatha isilwane esidokotela wezilwane. Uchwepheshe uzokutshela ukuthi kufanele ugeze endaweni engcolisiwe. Hlanza izindlebe zakho wena ngokwakho! Yiba nempilo!
Hlanganisa isikhumba sezandla nezinyawo
Indlela yokugeza, uma ungowesifazane?
Izindlela eziyisisekelo zokuqeda ama-tattoos
Ukunakekela impilo: indlela yokuhlukanisa i-Dry Dry yangempela kusuka emafake
Izakhiwo zokwelapha zodaka zokugeza
Ungabi kanjani isisulu selanga elivuthayo?
Phuza ku-melon nokusajingijolo
Ubuncane be-hydrocephalus ezinsana ezisanda kuzalwa
Ukunqamuka kwesikhashana nesisindo
I-stylish light spring ekhanda
Inkukhu shish kebab ngesiGreki nge-sauce
I-minimalism enhle kakhulu: izingubo zasehlobo ezivela ku-Yasya Minochkina
Cottage ushizi casserole nge-vanilla no-ukhilimu omuncu
Isaladi ngebhethoni, i-radicchio nommbila
Yini ongayethula ngoFebruwari 14, 2017 isoka ethandekayo nendoda, intombazane ethandekayo nowesifazane. Isipho sokuqala sosuku lwabo bonke abathandi ngezandla zabo
Izinkondlo ngoFebhuwari 23 ozakwabo emsebenzini nabalingani bebhizinisi - Abafushane bahalalisela abantu besigaba esisebenzayo kuLusuku lwe-Defender of the Fatherland Day
Rabbit esitayela sezwe